पेट्रोल पत्ता हूवर - iSearch
सुरु बगैचा बगैंचा उपकरण र उद्यान उपकरणहरू पेट्रोल पात निर्वात
0.1 पेट्रोल बूथ वैक्यूम क्लीनर 2017
0.2 उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्
0.3 आवासीय क्षेत्रहरूमा आवाजको स्तरले प्रतिबन्ध
0.4 पेट्रोल वैक्यूम क्लीनरको शक्ति
0.5 तुलनामा बिजुली वैक्यूम क्लीनर
0.6 वैक्यूम क्लीनरको प्रकार्य
0.7 के खरिद गर्ने?
0.8 Ergonomic पट्ट वैक्यूम क्लीनर
0.9 स्शन र झटका अपरेसनमा प्रदर्शन
0.10.1 फायदे र हानि
1 पेट्रोल वैक्यूम क्लीनर कहाँ लिने?
1.0.1 इन्टरनेटमा खरिद गर्दै
1.2 खरिद वा भाडामा - कुन कुराले अर्थ दिन्छ?
पेट्रोल बूथ वैक्यूम क्लीनर 2017
तपाईं सजिलो वैक्यूम क्लीनर संग समय र प्रयास को एकदम मात्रा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू एक संग सुसज्जित छन् पेट्रोल वा विद्युतीय मोटर, विशेष गरी, पेट्रोल पात निर्वात ठूलो फाइदाहरू। हाम्रो जानकारीले पत्तेको संसारमा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि हामी नयाँ बनाउँछौँ टेक्नोलोजीहरू, थाहा पाउनुहोस्, प्रकार्यहरू र सुझाव सुरक्षित पहिले। यस तरिकाले, तपाईले अघिसम्म खरिदहरू पनि जोगाउनुहुन्छ। जब तपाइँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ पेट्रोल पात निर्वात हामी तपाईंको लागि एक वा अर्को सल्लाह पनि जान्दछौं।
पात ब्लोअर पहिला व्यावसायिक उद्यमहरु संग संपर्क मा आयो। ठूला क्षेत्रहरू स्पष्ट थिए अधिक तर्कसंगत र पनि समय र कर्मचारीहरु लाई पनि बचत गर्नुहोस्। आज त्यहाँ एक विशाल बजार पनि छ घर प्रयोगकर्ता, यी यन्त्रहरूको साथ, चाँडै र प्रभावकारी ढंगले सानो बागानहरू वा धूल, पातहरू वा कम मात्रामा अन्य अशुद्धताहरू सफा गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह यो सँगै जान्छ कुचो वा rake, तथापि, क्षेत्रको आकार वा गतिविधिको आवश्यक आवृत्ति एक हुन सक्छ पेट्रोल-पात ब्लोअर चाँडो यो लाभदायक बनाउनुहोस्। पुराना व्यक्तिहरू वा शारीरिक सीमाहरू भएका व्यक्तिहरू, ज्वरो वा रिको नियमित रूपमा प्रयोग पनि साह्रै वा असंभव हुन सक्छ। छाया बिना कुनै हल्का छैन र यसैले उच्च खरिद मूल्यको अतिरिक्त प्रयोगको क्षति पनि छ। शोर स्तर पहिलो हो। भोल्युमको स्थितिमा, जुन कहिलेकाहीँ 100 decibels भन्दा माथि हुन सक्छ, कानको सुरक्षा सिफारिस गरिन्छ। निस्सन्देह, ध्वनिहरू छिमेकीहरूले पनि बुझ्दछन्, जो चाँडै बिग्रिएका छन्। साथै एसauger स्वाभाविक रूपले सबैलाई यसको सशक्त शक्तिसँग मेल खान्छ। बजरी सतहबाट सानो कंक्रीटहरू केवल केही कुकुरहरू जस्तै साना जनावरहरू जस्तै हुन्छन्, उदाहरणका लागि मेंढक, कीराहरू वा सागहरू।
आवासीय क्षेत्रहरूमा आवाजको स्तरले प्रतिबन्ध
उच्च शोर स्तर, जबकि कम से कम प्रयोगकर्ताले कान कानको सुरक्षाको रक्षा गर्न सक्दछ, नराम्रो पलायनहरूलाई मात्र योजनामा ​​पुर्याउन सक्छ, तर यो यन्त्र र मञ्च शोर सुरक्षा विनियमन पनि हो। यो पर्यावरणमा हानिकारक शोर उत्सर्जनका साथ यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ जब प्रतिबन्धहरूमा परिणामहरू। मोटरसाइकल पत्ता लगाउने र पनीर कलेक्टरहरू कुनै पनि समयमा आइतवार र सार्वजनिक बिदा मा संचालित हुन सक्छ। साँझ घण्टा एक प्रयोग 13 र 159बिहान अघि 17 घण्टा बीच र पछि हप्तादिन मा छैन दिनुभयो। व्यावसायिक आवेदन अपवाद सम्भव छ। को मा ध्वनि शक्ति स्तर मा निर्माता को एक अनिवार्य लेबल पनि छ पछिल्लो प्वाल वैक्यूम क्लीनर, जुन भन्दा बढी हुँदैन। अमेरिकामा मोटरसाइकल वैक्यूम क्लीनर किनभने उच्च आवाज उत्सर्जनको कारण।
व्यावहारिक एक हो पात ब्लोअर, यदि ब्लाउन्डलाई उडान गर्न पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसले धूल, गहिरो र पातहरूलाई सजिलै पथहरू र ठूला सतहहरूमा टाढा दिन्छ। यस अवस्थामा, हावा प्रवाह को दायरा एक कोशन शक्ति को एकाधिक छ। यो प्रत्येक मीटर व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत गर्न आवश्यक छैन, तर चाँडै सयौं वर्ग मीटर सफा गर्न सक्छ। त्यो पनि सँगै बुलबुले लाई ठूलो ढेर, जो त्यसपछि सजिलै चिसो हुन सक्छ, समयको ठूलो मात्रा र श्रम बचत गर्दछ। 90 वर्ष पछि बगैचाको लागि "वैक्यूम क्लीनर" एक बूमको अनुभव गरेको छ, र निरन्तर विकास गर्दैछ। यो आज खडा छ स्वयं नियन्त्रण साथै उपकरणलाई पछाडि पहने। Switchable संग मोडेलहरू पनि उड्ने समारोह त्यहाँ पनि क्रियान्वित छन् चूषण, यी यन्त्रहरू विशेष गरी उपयुक्त हुन्छन् जब पत्ते मात्र आंशिक रूपमा बन्छ। तर भत्काएको ढेर पनि सजिलै हातले जम्मा गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त पेट्रोल पात निर्वात पनि उपकरण संग सुसज्जित छ बिजुली मोटर उपलब्ध। यी या त पावर केबलहरू वा रिचार्जयोग्य ब्याटरहरूद्वारा संचालित हुन्छन्। इलेक्ट्रोमोडलहरूको लागि शोर पीढ़ी अझै अझ उच्च छ।
पेट्रोल वैक्यूम क्लीनरको शक्ति
भन्दा बढी पावर बिजुली मोडेल के पेट्रोल पात निर्वात, ठूलो बगैंचामा मध्यम वृक्ष जनसंख्याको आधारमा धेरै पत्थर पनि हुन्छ। यहाँ पेट्रोल पात निर्वात तिनीहरूका सबै बल। झाडी र झाडी भित्रको पत्थरमा पनि कुनै हस्तक्षेप पावर केबल हस्तक्षेप छैन, जस्तै बिजुली पाली हुडको ब्याट्रि बिना। 1 PS माथिबाट मोटर्स, प्राय: 2-Takter पात vacuums सामाग्री सजिलै संग चूस्यो दबाउन र fangsack मा। धेरै मोडेलहरूले कडा पट्टाले इन्टरनेट (रिक्त वजन 5-8 किलो) को अनुमति दिन्छ। कोच र पेट्रोल को सामग्री वजन मा जोडें। स्शन र / वा ब्लोवर आउटपुटमा, धेरै यन्त्रहरू मा स्थापना गर्न सकिन्छ चरणहरू, थप भूमिकाहरूले पनि सतहहरूमा कामलाई सरल बनाउँछ। एक माध्यम बाट एकीकृत काट इकाई चिसो-इन सामग्रीको मात्रा अनुपातमा 16: 1 मा घट्न सकिन्छ। यसले फंगलिंग थल खाली गर्न पहिले लामो काम गर्न सम्भव बनाउँछ। यसको अतिरिक्त, निपटान वा composting, जुन अल्पविरामको माध्यमबाट अधिक चाँडै प्रगति गर्दछ, धेरै कम ठाउँ चाहिन्छ। मूल्यहरू उचित छन् पेट्रोल पात निर्वात इलेक्ट्रोमोडल्स मार्फत (90-600 यूरोको बारेमा) र त्यहाँ मर्मतको लागि अझै पनि लागतहरू छन्। तिनीहरू शक्ति जडानबाट स्वतन्त्र छन् र अधिक शक्ति प्रदान गर्छन्। तिनीहरू इन्जिन भन्दा केही भारी र उकालो हुन्छन् बिजुली पात ब्लोअर.
तुलनामा बिजुली वैक्यूम क्लीनर
एक को केहि हानि पेट्रोल पात भ्याकुम क्लिनर एक ही समय मा इलेक्ट्रनिक पत्थर वैक्यूम क्लीनर को फायदे हो। तिनीहरू सस्ता छन्, हल्का वजन छ र ऊ ठूलो रूपमा होइन। तिनीहरू पेट्रोल जलाउँदैनन् र यो उत्पादन गर्दैनन् निकास नबुझेको छैन, तपाईंलाई रिफ्युल गर्न आवश्यक छैन र इन्जिनलाई सुरू गर्नु हुँदैन, तिनीहरू बटनको धक्कामा काम गर्छन्। मोडेलमा निर्भर गर्दछ, बिजुली को खपत 1kw (1000 वाट) र 3kw (3000 वाट) को बीच भिन्न हुन्छ। पृथक समायोज्य शक्ति चरणहरू उपकरणको आधारमा सामान्यतया उपलब्ध छन्। यसले अनुमति दिन्छ इष्टतम समायोजन प्रयोगका शर्तहरू। पावर जडानको लागि मोडेलहरू, भू-भागको आकारसँग एक एक्सटेन्सन केबल उपलब्ध हुनु पर्छ। रिचार्जेबल ब्याटरीहरूसँग इलेक्ट्रिक प्रशंसक ब्लेडहरू पावर सप्लाईको लागि मोडेलको एउटै फायदाहरू छन्, तर ब्याट्रीको कारणले गर्दा एक थोरै उचाई। तपाईं आफ्नो अपरेशनको लागि पावर जडानको आवश्यकता पर्दैन, तर बिजुलीको रूपमा ब्याट्रीलाई बिजुली आपूर्ति मार्फत शुल्क लगाइनेछ। यसको मतलब तिनीहरूसँग मात्र सीमित अवधि छ। केही यन्त्रहरू प्रयोगका लागि, उदाहरणका लागि, 18 V लिथियम-आयन ब्याट्री। यसले लगभग 10 मिनेटको सञ्चालन समय दिन्छ। ताररहित पात blowers को लागि अधिक उपयुक्त छ साना क्षेत्रहरु, जुन केहि मिनेटमा सफा गरिन्छ। 35 र 300 यूरो बीच लागत-प्रभावी ब्याट्रि-संचालित वैक्यूम क्लीनर छ।
ब्याट्री अपरेसनको लागि वैक्यूम क्लीनरहरूसँग मात्र लोड हुने हुनुअघि एक छोटो अपरेटिङ टाइम (लगभग 10 मिनेट) छ। ठूला क्षेत्रहरूको लागि, यो एक वा दुई चार्ज गरिएको स्पेयर ब्याटरहरू उपलब्ध हुनको लागि उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैले यो परिवर्तन गर्न सजिलो छ र काम लामो समय सम्म बाधा गर्न सकिदैन।
वैक्यूम क्लीनरको प्रकार्य
एक पात ब्लोअर एक कुशन प्रभाव को आवश्यकता हो, जसको साथ पत्तियां र अन्य कचरा चूसा जान सक्छ। चूषण प्रभाव एक ब्लोवर द्वारा निर्मित गरिन्छ, जुन मोटर द्वारा संचालित हुन्छ। यो इञ्जिनमा पेट्रोल वा विद्युत् मोटर हुन सक्छ। ब्लीवरले इन्फेर गुणाको अगाडिको उद्घाटनमा हावा बेकार गर्दछ र यसलाई बिना-वायु-तंगमा धक्का दिन्छ Shred झोला। केही मोडेलहरूमा, एक बन्द एकाइ हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ, जुन इन्जिन द्वारा संचालित हुन्छ। हावा फ्याङ्गबाट ​​बचाउँछ, त्यस पछि ठूला कणहरू धारण। धेरै क्यानोपियाहरूले वायु प्रवाहलाई उल्टाउन सम्भव छ। यसले इन्टरनेटबाट 400 किलोमिटर / घण्टासम्म हवाइको कारण बनाउँछ पात blowers काम गर्दछ। पत्ता खाली वैक्यूमर्स 80 वर्ष मा बजार मा आए र पेट्रोल इन्जिन संग सुसज्जित थिए। आज, बिजुली मोटर्स सहित धेरै मोडेलहरू पनि उपलब्ध छन्। पावर जडानको लागी उपकरणहरूसँग पनि त्यहाँ उपकरणहरू छन् ब्याट्री, पेट्रोल इन्जिनसँग मोडेलहरू शक्तिशाली छन्। तिनीहरू शक्तिशाली श्रिडर्डका साथ राम्रो तरिकाले उपयुक्त अनुकूल छन् र यसको लागि उपयुक्त छ सजिलो परिस्थितिहरु उदाहरणको लागि जब झाँसीहरू र झाडीहरू भित्र हटाइन्छ।
जब पेट्रोल एक पेट्रोल पात भ्याकुम क्लिनर र आवश्यक पेट्रोल canisters र भण्डारण छनौट लाग्छ। अग्नि सुरक्षा नियमहरू हेर्न सकिन्छ।
के खरिद गर्ने?
एक पात ब्लोअर अनुप्रयोग प्रोफाइल अनुसार खरिद गर्नुपर्छ। पथहरू सफा गर्न वा सट्टा सतहहरू पनि, साना यन्त्रहरू पहिल्यै उपयुक्त छन्। यी सस्ता र हल्का छन्। ठूला क्षेत्रहरूको लागि र विशेष गरी अधिक परिचालन परिस्थितिका लागि, बलियो उपकरण उत्तम छ। पेट्रोल पात निर्वात र बिजुली मोडेलहरू छन् जसको शक्ति क्रमशः ह्याण्डसेभर र केडब्ल्यूमा व्यक्त गरिएको छ। 1kW 1,36 PS सँग मेल खान्छ। उच्च शक्ति, अधिक शक्ति इन्जिन छ। यसको अतिरिक्त, हावा वेग र हावा भोल्युम मा डेटा पनि दिइन्छ। गृह प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध पेट्रोल पात निर्वात सामान्यतया दुई-स्ट्रोक इन्जिन, व्यावसायिक प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ जो, ठूलो चार स्ट्रोक इन्जिन संग सुसज्जित छन्।
Dolmar 701252350 पेट्रोल वैक्यूम क्लीनर PB-252.4 V 0.81 kWDisplay
पेट्रोल4स्ट्रोक इन्जिन
OHV इन्जिन प्रकार
विस्थापन: 24,5 सीसी
पावर 0,81 केडीई (1,10 पीएस)
Ergonomic पट्ट वैक्यूम क्लीनर
शक्तिशाली यन्त्रहरू लगभग कुनै पनि आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्। यद्यपि, उपकरणहरू सञ्चालन परिस्थितिमा अनुकूलित हुनुपर्छ। सानो क्षेत्रको लागि भारी पेट्रोल पात निर्वात खरीद गर्न लक्ष्य भन्दा बाहिर गएको थियो। साना यन्त्रहरू छन् सजिला र सबै भन्दा माथि सजिलो। प्रयोगको आवृत्ति पनि विचार गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ मात्र भर्खरै बगैंचाबाट पातहरू हटाउन चाहानुहुन्छ भने, यदि यसले लामो समय लिन्छ भने तपाईले पनि सानो यन्त्रलाई सँभाल्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी ठूलो फ्यान-ब्लेडको वजनको कारण ब्याकमा राख्न सकिन्छ।
स्शन र झटका अपरेसनमा प्रदर्शन
एक्शन फोर्स प्रति मिनेट हवा को क्यूब मीटर मा व्यक्त गरिन्छ,7र 16 क्यूबिक मीटर को बीच। त्यसो भए पनि ठूलो पत्ते in छोटो समय सामना गर्न। हावा प्रवाह उल्टाउन र उपकरण पात ब्लोअर रूपमा संचालित छ भने, हावा प्रवाह गति संकेत छ। आधुनिक पेट्रोल पात निर्वात 400 किमी / घन्टा सम्मको हवाफ्लो उत्पन्न गर्न सक्छ।
ब्यापार वा कन्टेनरको आकार, नियमको रूपमा, उपकरणको प्रदर्शनमा अनुकूल छ। ठुलो यो हो, अब लामो खाली खाली गर्न सकिन्छ। राम्रो मोडेलले कम से कम 35 लीटरको क्षमता छ।
फायदे र हानि
साना यन्त्रहरू, जुन पनि सुसज्जित छन् काँध वजन वितरण गर्नुहोस्, ब्याकमा लोड घटाउनुहोस्। थोरै रसियाली, फैलाउने र पलायन गर्ने समय आवश्यक हुँदैन। सुरक्षाका लागि पत्तिहरू र थप कचराको तरिकाहरू र चरणहरू प्रयोग गरिन्छन्। एक संग पेट्रोल पात निर्वात वा एक बिजुली वैक्यूम क्लीनर घाँस पनि पातहरू हटाउन सकिन्छ। प्रत्येक सर्दी अघि लान साफ ​​गर्नु भनेको सिफारिस गर्नु हो। एक एमotorisierter तर यो पनि दोष छ जुन स्वीकार्नु पर्छ। खरिद मूल्यको अतिरिक्त, पेट्रोल पत्तिहरूले पनि मर्मत चाहिन्छ, जुन लागतमा प्रवेश गर्दछ। यन्त्रहरूको प्रयोग शोर उत्पन्न गर्दछ, जुन यसको अर्थ हो कि तिनीहरू निश्चित समयमा मात्र आवासीय क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरू आइतबार वा सार्वजनिक बिदाहरूमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।9घडी र 17 घडी पछि यो होइन र 13 - 15 घडीको बीच छैन। साना जनावर र कीराहरू चिसो गर्न सकिन्छ। पेट्रोल पात निर्वात न केवल बिजुली मोडेल भन्दा ठूलो छ, तर निकास नलीहरू पनि उत्पादन गर्छन्।
पेट्रोल वैक्यूम क्लीनर कहाँ लिने?
एक पल्ट पात ब्लोअर मूलतः हार्डवेयर भण्डारमा वा स्थानीय डीलरमा। बगैचा को आपूर्ति संग DIY स्टोर पेट्रोल पात निर्वात तिनीहरूको वर्गीकरणमा। तर त्यहाँ यस्तो यन्त्र खरीद गर्न अन्य तरिकाहरू छन्। डिस्काउंट मोडेलहरू शरद ऋतुको समयमा पनि उपलब्ध छन्। यो सामान्यतया सस्ता हो, तर प्राय: यी नामहरू होइनन्। बिजुलीको व्यापार श्रृंखलाहरूमा प्रायः भेटिन्छ बिजुली वैक्यूम क्लीनर प्रस्तावमा। गुणस्तरको मूल्य छ र जसले प्रायः लेभेसफरहरूको साथ काम गर्न आवश्यक छ वा पहिला खरीद भन्दा अघि सूचित गर्न सकिन्छ। प्रसिद्ध निर्माताहरू गुणस्तरमा निर्भर हुन्छन्। यदि तपाई जान्नुहुन्छ कि कहाँ जान्छ भने मूल्यहरू स्वचालित रूपमा अधिक महंगी हुने छैन।
इन्टरनेटमा खरिद गर्दै
इन्टरनेटमा अधिक बढि लोकप्रिय छ। यहाँ मूल्यहरू छिटो र सजिलै संग तुलना गर्न सकिन्छ। एक सम्झौता खोज्न सजिलो छ, त्यसैले एक ब्रान्ड उत्पादन महत्त्वपूर्ण सजिलो छ। इन्टरनेट खरिदका साथ लाभ पनि सानो समय व्यतीत हो। ड्राइभिंग समय र निर्माण व्यापारमा थोरै प्रतीक्षा गर्दै अब आवश्यक छैन। शुद्ध मा प्राप्त गर्न व्यक्तिगत मोडेलको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि पर्याप्त छ। इन्टरनेटमा लाभ प्राय प्रायोज्य प्रस्तावहरू र विक्रेताको आंशिक लगभग निरन्तर पहुँचयोग्य हो। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि आफ्नो चाहेको मोडेल पठाउन सक्नुहुनेछ।
विशेषज्ञ डीलरबाट एक पत्थर क्लीनर चयन गर्दा, उपकरण कंधे माथि बेल्ट संग लटकाउनु पर्छ। यो बताउन एकमात्र तरिका हो कि यो उपकरण धेरै भारी छ वा कंधोमा पट्टा परेशान छ। बेल्टको राम्रो समायोजन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
खरिद वा भाडामा - कुन कुराले अर्थ दिन्छ?
पेट्रोल पात निर्वात वर्ष भर प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि गर्मी पछि लन mowing वा जब किनाराहरू किनारा कटरसँग मस्यौदा गरिएको छ। कोहीसँग त्यस्तो व्यावहारिक छ बागवानी उपकरण सक्नुहुन्छ छ, मार्ग र क्षेत्रहरू त्यसपछि छिट्टै फेरि सफा गर्नुहोस्। तर मुख्य अनुशासन Laubfall मा शरद ऋतुमा आउछ! धेरै पातहरू लान, बेडहरू, सतहहरू र पथहरूमा पर्दछ। यो कष्टप्रद हुन सक्छ, किनभने अर्को दिन काम सुरु हुन्छ। यो सबै पत्तियां तल नभएसम्म उनीहरूलाई झण्डा लाग्ने आदर्श हुन सक्दछ। यद्यपि, यो सामान्यतः होइन। गार्डन र पथहरू उपेक्षित छन् र नमी संग संयोजनमा, तिनीहरू स्किडिंगको कारण पनि दुर्घटना जोखिम हुन सक्छ। किनारा पत्थरहरूमा पत्थरको पछाडि अतिरिक्त रूपमा ट्रिपिंगको जोखिममा थप्नुहोस्। त्यसैले क्रियाकलाप नियमित अन्तरालहरूमा दोहोर्याइएको छ जबसम्म सबै पातहरू मैदानमा पुग्दैनन्।
अक्सर यो मात्र होइन आफ्नै रूखहरू, जुन गुणमा पत्ते वितरण गर्दछ। हावा पनि अन्य भूमिबाट पत्ते झिक्न सक्छ, साथै यसको पातलो छिमेकीहरूले भूमिगत हुन सक्छ। अधिकांश मानिसहरूले यसलाई तुरुन्तै हटाउँछन्, जसरी निरन्तर पुनरावृत्तिले निराशा विकास गर्न सक्छ र कुल समयलाई लुटाउन सक्छ।
पत्ता वैक्यूम क्लीनर पनि पेट्रोल पात निर्वात, अधिक र अधिक किफायती र शक्तिशाली हुँदैछन्। समय र प्रयास यी उपकरणहरू द्वारा कम हुन्छ र नियमित रूपमा नियमित प्रयोग अब कुनै समस्या छैन। धेरै मानिसहरूले यी फाइदाहरू प्रयोग गर्छन्। तथापि, प्रश्न बनी रहन्छ कि खरीद किन सार्थक छ वा आवश्यक छ भने लेभेसफल केवल भाडामा छ। किनभने केवल शक्तिशाली पेट्रोल पात निर्वात पहिले नै वित्तीय खर्च चाहिन्छ, मर्मत द्वारा खरीद पछि। शरद ऋतु मात्र एक वर्षमा हुन्छ। त्यसपछि, विशेष गरी यदि पत्ते को तुरुन्तै हटाउन र केहि समय को लागी एकत्रित गर्न को लागी छैन, बस एक पत्थर वैक्यूम क्लीनर किराए मा एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। भाडा र खरीद बीचको निर्णय सामान्यतया आवश्यकताहरु र उपयोग को आवृत्ति द्वारा निर्धारित गरिन्छ। यस गणनाको साथ, यो ध्यान दिनु आवश्यक छ कि हरेक कम मूल्यको वैक्यूम क्लीनरले यो के गर्ने प्रतिज्ञा गर्दैन। मूल्यहरु मा पहिले नै छन्, जो राम्रो को लागि दैनिक भाडा मूल्य भन्दा कम छ पेट्रोल पात निर्वात (को बारे मा 15-45 यूरो)। वैकल्पिक रूपमा, यसले सामुदायिक खरिदको अर्थ बनाउन सक्छ। धेरै छिमेकीहरू लागतमा भाग लिन्छन् र सबैजना आफ्नो शरद ऋतु सफा गर्न सक्छन्। यस अवस्थामा, जोर काम गर्ने शोरको बारेमा उजुरी अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
विज्ञापन: पेट्रोल वैक्यूम क्लीनर खरिद गर्नुहोस्
फक्सटेक पेट्रोल प्रशंसक FX-LBS126 पात ब्लोवर चोपर 4in1 प्रकार्य इनcl। दुई झन्डा पाइप र फ्याङप्याक, माथिल्लो कक्षा 1,4 प्रदर्शन परीक्षण
पत्ता ब्लोअर को हाइलाइट डबल डिलिंग प्रकार्य हो! पहिले नै incl। विभिन्न काम असाइनमेन्टहरूको लागि दुई झण्डा पाइपहरू
एक निश्चित / डामफ्लुट सतह मा सफाई को लागि सीधा र घुमावदार झटका पाइप र नरम जमीन मा, उदाहरण को लागि लन सतह
अब नयाँ र ठूलो फ्यान व्हीलको कारणले अझ बलियो 71m / s हावा हावा गति, ग्यास सहज सञ्चालनको लागि ग्याँस लक, कार्बोरेटर संग प्राथमिक पम्प
ठूलो संग्रह थैला को लागि चूषण समारोह, धातु को बने ठोस बन्द पंजा 12 मा पत्ते को क्रश गर्दछ: 0
फक्सटेक टिप: हाम्रो यन्त्रहरूको इष्टतम र लामो समयसम्म सञ्चालनको लागि, हामी हाम्रो मूल फक्सटेक तेलहरूको सिफारिस गर्दछौं - जर्मनीमा बनाइएको।
पात ब्लोअर in in१ पात ब्लोअर 3० एल संकलन ब्यागको साथ, 1० एमएल पेट्रोल ब्लोर दुई-कक्ष मोटरसहित, अगाडि नोजल प्रदर्शनको कार्य
शक्तिशाली र व्यापक प्रकार्य:31 प्रकार्यमा: उड्ने, चूसने, काट्ने। एयरस्पेड: 250 किमी / घण्टा भन्दा बढी; सक्सन पावर: 660 m³ / h; धातुको छुरी काट्ने; बिछ्याउने अनुपात: 12: 1 (कम्पोस्टिंग, समय बचत, वातावरण मैत्री)।
धेरै फरक ब्लोअर पाइप र समायोज्य ब्लोअर गति: विभिन्न कार्यहरूको लागि सीधा र वक्र ब्लोअर पाइपको साथ बहुक्रिया, जस्तै लन, फुटपाथ, ड्राइभवे, बगैंचा, यार्ड, गेराज र अन्य हवा गति अधिकतम। 250 किमी / घन्टा, केवल नम पातहरू फ्याँक्नुहोस्।
कम्फर्ट र आवाज घटाउने: नरम पकड, एन्टी-कम्पन प्रणाली, शुद्ध वजन मात्र करीव। 4,5 किलो-उपयोगी र प्रकाश, आरामदायी काम सुनिश्चित गर्न। लामो कामका घण्टाको लागि समायोज्य काँध पट्टा, एक रमाइलो काम गर्ने अनुभवको लागि डुअल-चेम्बर निकास मार्फत ध्वनि कम।
सुरक्षा र अनुप्रयोग: सुरक्षा स्विच अन / अफ। केवल पातहरू, घाँस, कागजहरू, जिद्दी फोहोरहरू, टेरेसहरू, ड्राइभवे, फुटपाथ, ग्यारेज, लन, आँगन, बगैचा र ठूला क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त ढल्काउनुहोस्।
एक पूर्ण सेट:3भ्याकुम क्लीनर, स्पार्क प्लग रिन्च र उपकरण सेट, पेट्रोल / तेल मिक्सिंग कन्टेनर, दुई टुक्रा इन्टेक मनिफोल्ड, जोड नोजलहरूको साथ बहु-भाग ब्लोअर ट्यूब, 1L संग्रह झोला, उपयोगकर्ता पुस्तिका।
blowpipe 126tlg चूषण + संग्रह झोला, विरोधी-कम्पन समारोह सहित FUXTEC व्यावसायिक पेट्रोल पात ब्लोअर FX LBS3P पात ब्लोअर Chopper 1in2 समारोह -। द्वारा ह्यान्डल इन्जिन प्रदर्शन बाट decoupled
नयाँ अर्ध्रोफेसीय प्रशंसक-प्रवाहको एक विशेष विशेषता विरोधी-कंपन प्रकार्य हो। ह्याण्डलबाट निस्किएको मोटरको लागि धन्यबाद, यन्त्रमा कम्पनहरू थप कम छन्! यस प्रकार, पत्ते चूसिएको वा उडाएको छ, उदाहरणका लागि, अझ सजिलै संग।
वितरण blowpipe ठोस / कोलतार आधार मा उदाहरणका लागि, यस्तो नरम जमीन मा मलबे ब्लोअर को प्रयोग रूपमा सिर्फ एक तस्वीर साफ छ जो, समावेश गरेर एउटा Rasenfläche.Das झटका पाइप यसरी, उदाहरणका लागि, पानाहरू सँगै Blown गरिन्छ, सामाग्री हावा दबाव conveys एकदम अझ प्रभावकारी
शक्तिशाली, अझै पनि आर्थिक इन्जिन हाम्रो वैकल्पिक उपकरण भन्दा पनि ठूलो ट्याङ्किङ (500ml) सँग सुसज्जित छ। तसर्थ, अझ ठूलो 60 एल सङ्कलन झोला संग जडान र पनि कम कंपन को ह्यान्डल लामो र कुशल सञ्चालन गर्न सुनिश्चित छ। Ergonomic संभालती छ साथै विरोधी-कंपन प्रणाली सहज काम गर्दै वादा गर्दछ।
डिजाइन पक्ष स्कर्ट, नयाँ कम उत्सर्जन EU2 इन्जिन सहित Laubsaugfunktion लागि अनुकूलित हावा सेवन - 25,4ccm³ विस्थापन, अधिक मजबूत र उच्च गुणस्तर सामाग्री चयन र प्रशोधन, इन्धन मिश्रण 1: 40, प्राथमिक पम्प, चूषण लागि ठूलो shred झोला, विशाल Häckselkralle धातु shreds मा पात संग कार्बोरेटर 12: 0
लक्स-उपकरण B-LS-30 / 40 पेट्रोल पत्ता ब्लावर संग झटका र चोपर फंक्शन incl। 40 एल थैला र पट्टा | ताररहित 3in1 पात ब्लोवर र वैक्यूम क्लीनर 30 सेन्टीमिटर2स्ट्रोक मोटर र सहायक रोलर सूचक
मोबाइल पेट्रोल-संचालित लक्स-उपकरण पात निर्वात2मी / घन्टा अधिकतम हावा को गति 720 m³ / घन्टा को एक सेवन क्षमता संग शक्तिशाली 250-स्ट्रोक इन्जिन धन्यवाद विश्वस्त
चूषण र धौलागिरी प्रकार्यको अतिरिक्त, इकाईले एक एकीकृत कन्ट्रिडर छ कि छाती (गीला) प्वाइन्टमा 40 एल थलोमा चिसो र यसैले ब्लकले रोक्छ।
पट्टे पट्टि र सेन्प्लेट तहमा दुई पाङ्ग्राहरू समावेश गर्न सजिलो बनाउँदछ, विशेष गरी जब ठूलो बगैंचा क्षेत्रमा सफा गर्ने
लक्स-उपकरणबाट गार्डन पावर टूल्स सीरीजमा, अभिनव विचारहरू र बगैचाको उपकरणको निर्माणमा अनुभवका वर्षहरू बुद्धिमानी डिजाइन गरिएका मिसिनहरूमा मर्ज गर्दछ।
आपूर्ति को स्कोप: 1x पेट्रोल पात ब्लोअर बी-रास-30 / को 40 भज, 1x 1 एल क्याच-झोला पट्टा क्षमता संग लक्स-उपकरण को 40 1x | ATTENTION: कृपया 1 को तेल-पेट्रोल मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस्: 50!
अरेबोस पेट्रोल पात ब्लोअर | 700 W | Incl। 45 L संग्रह झोला | सक्सन र उडाउने समारोहको साथ | विशाल chipper पंजा 7500 RPM प्रदर्शन
26 सेमी³ घन क्षमता
700 W मजबूत ईन्जिन र 7500 प्रति मिनेट क्रान्तिहरू
अधिकतम वायु गति 71 मि / से
पेट्रोल मिश्रण 1: 40
प्राथमिक पम्प धन्यवाद छिटो सुरु गर्नुहोस्
ब्रास्ट पेट्रोल पात ब्लोर पात ब्लोअर फोल्डर Chipper 1,0kW (1,36PS) 55L वाहक झोला पट्टा एन्टि-भाइरेशन 4in1 Tüv परीक्षण संकेतक
4in1 BRAST BRB-LS 3000 पेट्रोल पात ब्लोर, पात ब्लोर र पात चिप्पर केही विशेष हाइलाइटहरूसहित आउँदछ: 30ccm विस्थापन र 1000 वाटको पावरसँग, यसको प्रायः प्रतिस्पर्धाहरू भन्दा बढी शक्ति छ।
थप रूपमा, प्रतिस्पर्धी वातावरणमा, हामीले सामान्यतया बिभिन्न उद्घाटन र झुम्कासँग असामान्य2ब्लोपिप्सहरू समावेश गर्दछौं, ताकि तपाईं दुबै फर्म र नरम जमिनमा उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यसबाहेक, उपकरण पनि अतिरिक्त काँध पट्टा संग सुसज्जित छ, त्यसैले तपाईं उपकरण को वजन राख्न छैन र धेरै लामो त लत्तो बिना काम गर्न सक्छन्
चुरोट र प्राथमिक पंप गर्न सजिलो सुरुवात
एन्टी-कम्पन ह्याण्डल, 55l धेरै ठूलो स collecting्कलन बोरा, द्रुत कार्य परिणामहरूको लागि 265km / h को साथ उच्च हावाको गति साथै प्राइमर पम्पको लागि सजिलो सुरूवात धन्यवाद र बीआरएएसटी आल राउन्डरको प्रोफाइल पूरा गर्नुहोस्।
Makita पेट्रोल ब्लावर, ZMAK-BHX2501View
तीव्र र टिकाऊ
DeTec। 2-in-1 पेट्रोल पात ब्लोअर र पात ब्लोअर DT-BL260 झोलाको साथ, बोक्ने पट्टा र ह्यान्डल सहित। प्रक्टिकल फोरेज हार्वेस्टर गति नियन्त्रणको साथ पेट्रोल इञ्जिन सूचक
आदेश: एक सहजै सफा र सफा बगैंचा, पातहरू, घाँस र फोहोरबाट मुक्त। L 45L को साथ ठूलो स collecting्कलन ब्यागलाई धन्यवाद, कष्टकर स्वीपिंग अब आवश्यक छैन।
द्रुत: सुक्खा र पसिना पातहरू सिधा सारिएको छ एकीकृत पातको श्रेडरलाई धन्यवाद। यसले महत्त्वपूर्ण अपशिष्टको मात्रा घटाउँछ र छोटो कम्पोस्टिंग समय सक्षम गर्दछ।
COMFORTABLE: काँध पट्टा र एक अतिरिक्त ह्यान्डल उपकरणमा सहज काम सक्षम गर्नुहोस्। लामो सक्शन र फ्लाई पाइपको लागि धन्यवाद, तपाईं सजिलै जमीन वा उचाइमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
स्ट्रONGन्ड: तपाईंको स्वच्छ सम्पत्तीको लागि २.25,4.cc सीसीएम विस्थापन कार्य। पेट्रोल ईन्जिनले तपाईंलाई एक बिजली जडान बिना स्वतन्त्र सफाई कार्य गर्न सक्षम गर्दछ।
सरल: तपाईं त्यसलाई लामो केबल बिना तपाईको सम्पत्तीमा स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्नुहुनेछ। शक्तिशाली पेट्रोल इञ्जिनलाई धन्यवाद, तपाईं शक्ति स्रोतहरू र कष्टकर पावर केबल्सबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। माइलेज भर परम्परागत ताररहित पात ब्लोअर भन्दा बढी छ।
मोन्जाना भ्याकुम क्लीनर41 पेट्रोल 660m³ / h संग्रह झोलामा 45L incl। उपकरण सेट पत्ती ब्लोर श्रेडर बगैचा भ्याकुम क्लिनर बगैंचा ब्लोअर सूचक
एक महान सहायक: यो 4in1 मोन्जाना भ्याकुम क्लीनरको साथ, तपाईं तपाईंको बगैंचामा, तपाईंको छत र तपाईंको पातहरू, साना शाखा र कागजातहरूको ठाउँ बचाउनुहुनेछ। तपाईं सक्सन फंक्शनको साथ पातहरू चूस्नुहुन्छ र अनुपातमा सिधा काट्नुहोस् 1: 12। अन्त्यमा, फोलीएज त्यसपछि ठूलो 45L स s्ग्रह बोरामा सारियो।
कडा र सरल: 26cm³ इन्जिनसँग 1 PS छ र प्राथमिक पम्पद्वारा धेरै सजीलो सुरू गर्न सकिन्छ। एन्टी-कम्पन प्रणाली र एर्गोनोमिकली डिजाइन गरिएको ह्यान्डलले सहजै लामो समय काम गर्न सक्दछ। तेल र ईन्धनको भरिने उपकरण बिना नै छिटो र सजिलोसँग काम गर्दछ।
लचिलो: सेटमा2फ्लोपिप्स छन् (वक्र र सीधा)। यसले नरम (वक्र पाइप) र हार्ड (सिधा पाइप) जमिनमा अधिकतम परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। घुमाउरो ट्यूब विशेष रूपमा पात घाँस क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त छ। यहाँ हावा प्रवाह पातको मुनि हुन्छ। सिधा ट्यूब विशेष गरी कडा जमिनको लागि उपयुक्त छ। यहाँ कम धूलो र ढु stones्गा फ्याँकिएका छन्।
परिवर्तन गर्न सजिलो र खाली: मजबूत उपकरण सक्सन उपकरण, ब्लोअर र श्रेडरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिकतम इञ्जिन गति 8500U / मिनेट र अधिकतम हो। हावाको गति 265km / h।
सामग्री: 1x 4in1 पात ब्लोअर | ड्राइभ प्रकार:2Tact - 40 (पेट्रोल): 1 (तेल) | सहित विभिन्न पाइप + कनेक्टर्स र उपकरण सेट मोमबत्ती कुञ्जी + क्रस रिन्चको साथ
कालो + डेकर पात ब्लोअर र ब्लोअर GW3030 हेलिकप्टर, l०एल झोला र दोस्रो ह्याण्डलको साथ - चर उड्ने गति 50१418 किमी / घण्टा सम्म - १³ m³ / मिनेट सक्शन पावर - पछाडि मैत्री प्रयोग
पत्ता लगाउने र प्वाल वैक्युमले सजिलै संग कठोर बागवानीको बर्बाद प्रशोधन गर्ने क्षमताको साथ मनाएको छ, shredding प्रकार्य को माध्यम ले कम्पास को त्वरित गर्दछ र निपटान को आसान बनािन्छ।
अत्यन्त बलियो: 418km / घन्टा उड्ने गति, 14 M³ / मिनेट को गति शक्ति - चर उडान गति ब्लेड विस्फोट मा आसान नियंत्रण को अनुमति दिन्छ
सुविधाजनक: 50 लीटर क्याच बैग को लागी धन्यवाद, कम रुकावट / हल्का र संतुलित संग काम गर्न सकिन्छ - फिर्ता-अनुकूल उपयोग को लागी
प्रायः सम्मिश्रणका पछाडि एकत्रित पत्तियां: धातु काटिएको पहिया बगैचाको बर्खास्त मात्रा को मात्रामा घटाउँछ 16: 1 / Laub Sucker सजिलै पनि गीला, जिद्दी गहिरो अवशोषित गर्दछ।
1 एक्स 3in1 बगैचा वैक्यूम क्लीनर र पात blowers, 50l संग्रह झोला मात्रा तकलीफ, काँध पट्टा र अतिरिक्त ह्यान्डल / वजन: 3.7 / 4.8 किलोग्राम /2वर्ष वारेन्टी आपूर्ति को स्कोप
अघिल्लो लेखकाउन्सर कंक्रीट ग्राइन्डर